Fibre Laser marika milina
UV laser marika milina
CO2 laser marika milina
Dot peen marika milina
Metal Laser fanapahana milina
Non-metaly tamin'ny laser fanapahana milina
Mpanonta rindrina 3D
Ny tombony amin'ny milina welding tamin'ny laser
Fotoana fandefasana: Nov-27-2021
Miaraka amin'ny fitomboana tsikelikely amin'ny fangatahan'ny tsena, ny teknolojia welding tamin'ny laser dia nohavaozina sy niova tsy tapaka, ary nisy fiakarana kalitao avy amin'ny sehatra ara-teknika. Ankehitriny, tamin'ny laser welding milina efa matotra ampiharina amin'ny sehatra maro, toy ny teknolojia avo lenta elektronika, fiara Manu...Hamaky bebe kokoa »
Fanamarihana hazo sokitra UV ho an'ny marika famantarana
Nanandrana marika maharitra teo ambonin'ny hazo izahay. Ary sokitra lalina amin'ny hazo izany. Tahaka ny log ao amin'ny horonan-tsary dia azo ampiasaina amin'ny milina marika UV izy io. Ity no marika ampiasaintsika amin'ny milina fametahana laser UV hanamarihana amin'ny hazo. Manana milina UV 3w sy 5w izahay, izay azo ampiasaina amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fampandehanana ny milina marika laser amin'ny hafanana ambany
Fotoana fandefasana: Nov-23-2021
Raha miasa amin'ny ririnina mangatsiaka ny milina fametahana laser, dia tsy maintsy atao ny fepetra sasany mba hahazoana antoka fa ara-dalàna ny fitaovana milina fametahana laser ary mahafeno ny fepetra takiana ny tontolo iasana alohan'ny hanatanterahana ny asa marika. Ireo singa ireo ihany koa dia manondro ny fikojakojana ny...Hamaky bebe kokoa »
Laser marika milina ampiasaina amin'ny firavaka sy ny asa tanana fanomezana orinasa
Ny teknolojia fanodinana laser dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny indostrian'ny firavaka sy ny asa tanana. Ny fampiasana ny fibre tamin'ny laser marika milina amin'ny tamin'ny laser marika sy tamin'ny laser sokitra mampanan-karena ny fomba fitsaboana ambonin'ny volamena sy volafotsy firavaka sy ny fanomezana, izay afaka mihaona bebe kokoa ny filan'ny tsirairay...Hamaky bebe kokoa »
Miaraka amin'izany, tsy matahotra intsony ny fanodinana-3D laser marika milina
Ao amin'ny dingana famokarana indostrialy, ny endriky ny ampahany maro dia tsy ara-dalàna, ary ny haavon'ny faritra sasany dia tsy mitovy. Sarotra ny mamaly ny filan'ny fanodinana marika mahazatra. Ny tombony amin'ny marika laser 3D dia nanjary nisongadina tsikelikely. Miaraka amin'ny fivoarana haingana ny las...Hamaky bebe kokoa »
Ny milina marika laser tanana dia kely sy mety. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny milina marika tamin'ny laser mahazatra, ary azo ampiasaina amin'ny lohany laser tànana ihany koa. Ny milina marika tamin'ny laser tanana dia afaka manao marika laser amin'ny faritra mekanika lehibe amin'ny lalana rehetra, izay mamaha ny olana ...Hamaky bebe kokoa »
Fibre tamin'ny laser fanamarihan'ny milina fametahana hardware metaly fampiharana
Fotoana fandefasana: Oct-30-2021
Miaraka amin'ny fivoarana sy ny fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia dia miseho eny an-tsena ny tetika marika isan-karazany. Ny fomba fanamarihan'ny marika tsirairay dia manana ny toetrany manokana sy ny isan'ny fitaovana mety. Rehefa misafidy ny mpampiasa, araka ny fepetra takian'ny fampiharana manokana ihany, dia afaka misafidy ny mety indrindra...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Oct-25-2021
Ultraviolet tamin'ny laser marika milina dia an'ny andian-dahatsoratra tamin'ny laser marika milina, fa mampiasa 355nm taratra ultraviolet imaging. Raha ampitahaina amin'ny laser infrarouge, ity milina ity dia mampiasa teknolojia avo roa heny amin'ny intracavity. Ny deformation mekanika amin'ny fitaovana sy ny fanodinana ...Hamaky bebe kokoa »
High Precision Sino-Glavo German Scanlab Metal Mold Jewelry Fibre Laser Engraving Machine Ho an'ny Volamena Volafotsy
Ho an'ny marika faran'izay tsara, toy ny kavina, rojo, sofina ary marika faran'izay tsara. Manoro hevitra izahay ny hampiasa Sino-Glavo SG andiany galvanometer, na mampiasa German Scanlab galvanometer ho marika. Ny milina fanamafisam-peo tamin'ny laser fibre dia azo ampiasaina amin'ny marika metaly, ary azo ampiasaina amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Ny milina fametahana laser dia manampy amin'ny famenoana fanafody manara-penitra kokoa
Fotoana fandefasana: Oct-11-2021
Nandritra ny fotoana ela, noho ny tsy fahampian'ny fifandraisana amin'ny antsipiriany amin'ny fivezivezena ny vokatra fanafody, dia tsy afaka nahatakatra tanteraka ny toe-draharaha eo amin'ny tsena afovoany sy ambany ny mpanamboatra fanafody. Izany dia tsy vitan'ny hoe manimba ny fiarovana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina, fa koa ny vidiny ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatry ny fanampiana amin'ny alàlan'ny EZCAD3.0 Software Fibre Laser Marking Machine ho an'ny sary sokitra lalina
Fotoana fandefasana: Sep-25-2021
Mikasika ny fampiharana ny EZCAD3.0 dia misy fahasamihafana maro amin'ny EZCAD2. Miorina amin'ny EZCAD2, ampiana ny fiasa marika 3D. Mazava ho azy, raha mila vokatra 3D ianao dia mila mampiasa galvanometer 3D hanamarihana. EZCAD3 dia afaka mamita ny vokatry ny sary sokitra lalina. Misy fahasamihafana hafa amin'ny E...Hamaky bebe kokoa »
ZC Laser dia manatrika ny lanonana fanaovan-tsonia ny "Recruitment indroa sy Citation indroa"
Tamin'ny 15 Jolay, nanao lanonana sonia ho an'ny tetikasa "Fampidirana indroa sy fidirana indroa" ny Fivondronan'i Lijin. Tetik'asa 14 miaraka amin'ny fampiasam-bola nokasaina 2,5 lavitrisa yuan no nosoniavina tamin'ny fomba mifantoka. Nanatrika ny lanonana fanaovan-tsonia ny sekreteran'ny Antoko ao amin'ny distrika Liu Wenlin ary nanome lanonana...Hamaky bebe kokoa »
Telefaonina: +86 0531-8802 2462
Miaraka amin'ny fitomboana tsikelikely amin'ny fangatahan'ny tsena, ny teknolojia welding tamin'ny laser dia nohavaozina sy niova tsy tapaka, ary nisy fiakarana kalitao avy amin'ny sehatra ara-teknika. Ankehitriny, milina welding tamin'ny laser dia m ...
Nanandrana marika maharitra teo ambonin'ny hazo izahay. Ary sokitra lalina amin'ny hazo izany. Tahaka ny log ao amin'ny horonan-tsary dia azo ampiasaina amin'ny milina marika UV izy io. Ity no marika ampiasainay UV laser marking machi ...